I-China iye yaba ngoyena mvelisi kunye nokuthumela ngaphandle kweemveliso ezichasene nobhubhane njengeemaski kunye neempahla zokukhusela | Sinnovation
I-China iye yaba ngumlimi omkhulu kunye nomthumeli ngaphandle weemveliso ezichasene nobhubhane njengeemaski kunye nempahla yokukhusela
Ngombulelo kulawulo olusebenzayo lwe-coVID-19 ekhaya kunye nokwanda okukhulu kwimveliso efanelekileyo, i-China iye yaba ngoyena mvelisi kunye nokuthumela ngaphandle iimaski, iisuti ezikhuselayo kunye nezinye iimveliso zokuthintela ubhubhane, inceda amazwe amaninzi kwihlabathi ukuba alwe nobhubhane. Ngaphandle kwe China, ngokweengxelo ezipapashiweyo zeentatheli ze Global Times, awaninzi amazwe okanye imimandla eqhubeka nokuthumela ngaphandle izinto zonyango.
Kutshanje iThe New York Times inike ingxelo yokuba imveliso yeemaski eTshayina yemihla ngemihla inyuka isuka kwizigidi ezili-10 ekuqaleni kukaFebruwari yaya kwizigidi ezili-116 kwiiveki nje ezine kamva. Ngokwengxelo yoLawulo Jikelele lweeMveli zeRiphabhlikhi yaBantu yase China, ukusukela nge-Matshi 1 ukuya ku-Epreli 4, malunga ne-3.86 yezigidigidi zobuso, iisuti ezingama-37.52 ezizikhuselayo, i-2.41 yezigidi zokufumana ubushushu be-infrared, i-16,000 ye-ventilator, i-2.84 yezigidi zamatyala e-Coronavirus i-reagent reagent kunye ne-8.41 yezigidi zeebhokhwe ezithunyelwe kwilizwe lonke. Amagosa aphuma kwiSebe lezoRhwebo lwaNgaphandle le-Ofisi yoMphathiswa Wezorhwebo abonakalise ukuba ukusukela nge-4 ka-Epreli, amazwe angama-54 kunye nemimandla kunye nemibutho emithathu yamazwe aphesheya ityikitye iikhontrakthi zokuthengwa kwezinto zonyango ngamashishini amaTshayina, kwaye amanye amazwe angama-74 kunye nemibutho eli-10 yamazwe aphesheya bebeqhuba urhwebo. Uthethathethwano lokuthenga kunye namashishini amaTshayina.
Ngokuchasene nokuvulwa kwe China kukuthunyelwa kwelinye ilizwe koncedo lwezonyango, amazwe amaninzi nangakumbi anyanzelisa ukuthintela ukuthunyelwa kwemaski ngaphandle, izixhobo zokuphefumla kunye nezinye izinto. Kwingxelo ekhutshwe ekupheleni kuka-Matshi, iGlobal Trade Alert Group kwiDyunivesithi yaseSt Gallen eSwitzerland ithi amazwe angama-75 kunye nemimandla inyanzelise imiqathango yokuthumela impahla ngaphandle kwamanye amazwe. Kule meko, awaninzi amazwe okanye imimandla ethumela ngaphandle izinto zonyango. Ngokwengxelo zamajelo eendaba, i-3M yase-US isandula ukuthengisa ngaphandle iimaski eCanada nakumazwe aseLatin America, kwaye iNew Zealand nayo yathumela iinqwelomoya eTaiwan ziyokuhambisa izinto zonyango. Ukongeza, ezinye iimaski kunye neekiti zokuvavanya ziyathunyelwa zivela eMzantsi Korea, eSingapore nakwamanye amazwe.
U-Lin Xiansheng, intloko yomvelisi weemveliso zonyango ezikwiphondo lase Zhejiang, uxelele iGlobal Times ngoMvulo ukuba isabelo se China sokuthumela ngaphandle iimaski kunye neesuti ezikhuselayo ziyanda kwihlabathi liphela, kukunyuka nje okuncinci kokuthunyelwa kwempahla yokuphefumla kunye nezinye iimveliso. "Unyango oluninzi lweenkampani zamazwe ngamazwe zibhalwe uphawu lwangaphandle, kodwa eyona mveliso ise China." Umnumzana Lin uthe ngokonikezelo lwangoku kunye nemeko yemfuno kwintengiso yamanye amazwe, i-China yeyona nto iphambili kwicandelo lezonyango lwezinto ezithunyelwa ngaphandle.